Olona luhlu luBalaseleyo lweZithandani, ingaba uzibonile zonke? | Ndinike ixesha lokuphola
Okwangoku, uthotho kwi-intanethi okanye kumabonwakude zisisiseko kubomi bethu yonke imihla. Zininzi iintlobo, kodwa kukho enye soze iphume ngesimbo: ukuthandana! Kungenxa yoko le nto ndibonisa ukhetho olukhethekileyo kunye noluhlu oluhle kakhulu lwezothando.
Ukuthandana ngumxholo onomdla ngokubanzi kwinyani nakwintsomi. Ubudlelwane bothando bunomdla kwaye abuqinisekanga- nabo bunzima kakhulu! Ukudibanisa iingcinga, iimvakalelo kunye nezenzo kukhupha ukungapheliyo kwamabali nazo zonke iintlobo zeziphumo, ezisetyenziselwa ukuphuhlisa umxholo kushishino lokonwabisa.
Yonwabela ukhetho lwethu kunye nothotho oluthandekayo lwamaxesha akutshanje.!
1 Ukwabelana ngesondo eNew York
2 Ukukhanya kwenyanga
3 Amantombazana aseGilmore
4 Ixesha phakathi kwemisonto
5 Ingaba ndadibana njani nomama wakho
6 Amantombazana eentambo
8 Ngaba olu khetho lolona luhlu lubalaseleyo lwezothando luzele iikiti?
Luthotho lweMelika kunye namanqanaba aphezulu abaphulaphuli ahlala iminyaka emithandathu (1998 ukuya ku-2004) kunye namaxesha onyaka amathandathu. Iyelenqe yile isethwe kwisiXeko saseNew York. Sifumana abafazi abane njengabadlali abaphambili: UCarrie, uMiranda, uCharlotte kunye noSamantha.
Iphawulelwe bonisa indlela yokuphila yabasetyhini kwihlabathi lanamhlanje nakwisixeko esikhulu: iingxaki zothando nezomsebenzi, ukungavisisani phakathi kwabantu kunye nokugxila kakhulu kubuhlobo nakubuzalwana beli qela labahlobo benza imixholo ephambili. Lelinye lawona manqaku aphambili othandwayo phaya!
Sifumana kwisiqendu ngasinye amava amatsha kubalinganiswa abaphambili ababandakanya amaqabane abo, imisebenzi yabo kunye nesondo elininzi! Olu luhlu luphula iiparadigms ngokubhekisele kwindima edlalwa ngabafazi kwisihloko esikhankanywe mva.
Ngokubanzi, isiqephu ngasinye sikhokelela ekubonakaliseni ngobomi kunye nothando kunye nobudlelwane phakathi kwabantu obuhamba kunye neminqweno yomlinganiswa ngamnye.
Ukusuka kwimbali "yokwabelana ngesondo eNew York" zimbini iifilimu ezikhutshiweyo ezakhutshwa ngo-2008 nango-2010, kukho intelekelelo malunga nesahlulo sesithathu kodwa ukuthatha inxaxheba komnye wabaphambili bekusemngciphekweni.
Unokufumana umxholo wamaxesha onke kumaqonga edijithali e-HBO kunye neAmazon!
Yiyo I-American classic classic Umdlali weqonga ngoku odumileyo ongumdlali waseHollywood uBruce Willis kunye nomlingisi uCybyll Shepperd.
Ibali lixelwa nge iarhente yomcuphi yenziwe ngumzekelo wangaphambili ogama linguMaddie Heyes noDavid Addison. Kwisiqendu ngasinye uthotho lwamatyala lubonwa ukuba lusonjululwe ngaxeshanye ubudlelwane bemvakalelo phakathi kwaba babini buyakhula.
Ibaleke iminyaka emine: phakathi kuka-1985 no-1989. Ungalufumana uthotho kwiAmazon Prime.
Idalwe ngu-Amy Sherman-Palladino, luthotho olubandakanya ukuthandana, idrama kunye nokuhlekisa. Iinkwenkwezi ngumama ongatshatanga kunye nentombi yakhe ekwishumi elivisayo, abathi nabo babe ngabahlobo abasenyongweni. Yayibanjwa iminyaka esixhenxe kunye ne-premiere yonyaka rhoqo ngonyaka.
Ibali libalisa ngobomi bukaLorelai, ozala uRory ngexesha lokufikisa kwaye uvela kusapho olutyebileyo. Uvukela abazali bakhe abalawulayo kwaye uthatha isigqibo sokushiya ikhaya esemncinci ukuze akhulise intombi yakhe eyedwa. Ngomzamo omkhulu, uyakwazi ukufumana ihotele encinci ebalekayo nalapho abahlobo bakhe abasondeleyo basebenzisana khona.
Olu luhlu luqala kwiminyaka kamva, xa eguqukela kubazali bakhe ukuxhasa umzukulwana wakhe ngemfundo yakhe. Ukuhlangana kwakhona kosapho kunye namantombazana aseGilmore bazibandakanya kwisidlo sangokuhlwa seveki kwindlu yootatomkhulu babo.
Kwelinye icala, uRory ngumfana okwishumi elivisayo ongumzekelo: linoxanduva, mhle, unothando, unengqondo kwaye unesoka lokuqala elifanelekileyo. Kuwo onke amaxesha okuqala sifumanisa ukuba ufunda njani ukujongana neengxaki zesikolo, iyantlukwano kwezentlalo kunye nemicimbi yothando eyenza ukuba kube nzima mihla le. Ibonisa ukukhula kwakhe buqu de waphumelela ikholeji kwaye waba yintatheli.
Zombini ezi protagonists zidlula kwizibini ezahlukeneyo zothando kumaxesha onyaka ahlukeneyo de bafumane olwabo uthando lokwenene. Olu luhlu lusinika isifundo kwixabiso losapho, ubuhlobo kunye nokubaluleka kokungqinelana kubudlelwane.
Ngo-2016, iNetflix yagqiba kwelokuba ikhuphe uthotho oluncinci kunye nabo bonke abalinganiswa ababuyayo: "Amaxesha Amane Amantombazana aseGilmore". Ukulandelelana kusihlaziya kubomi bukaLorelai noRory, kunye nabantu ababangqongileyo.
Sifumene utshintsho olukhulu kubalinganiswa kunye nesimangaliso esingalindelekanga ekugqibeleni! Uqikelelo malunga nokuqhubeka lusemoyeni ...
Lulungelelwaniso lwenoveli yembali yemvelaphi yaseSpain, yaziswa kwiscreen ngo-2013 njengothotho lukamabonakude olunezahluko ezili-17. Umlinganiswa ophambili nguSira Quiroga, umfazi odlalwa ngumlingisi uAdriana Ugarte.
USira, ungumthungi oselula Imvelaphi ethobekileyo evela kwisixeko saseMadrid. Ukhule esebenza njengomthungi kwiworkshop yomhlobo osenyongweni kanina, owayenguye owamfundisa ubugcisa bokwenza amalaphu kunye neenaliti.
Ushiya isithandwa sakhe ukuba ahambe noRamiro, umfana omhle osandul 'ukudibana naye kwaye athandana naye kabuhlungu. Bahlala eTangier, eMorocco kwaye baqala ukuhlala kwiintsuku zephupha eligcwele ubunewunewu, amatheko kunye namaxesha amnandi.
URamiro ngokungalindelekanga ushiya isixeko emva kokutshutshiswa ngobuqhetseba, ulwaphulo-mthetho olutyholwa nguSira, ngokudibana. Ufumana isivumelwano sokuphuma kule ngxaki kwaye wanyanzelwa ukuba afudukele eTetouan. Kwangelo xesha kuqhuma imfazwe yamakhaya yaseSpain apho umama wakhe asemngciphekweni.
Ngokuzazisa, waseka indawo yokusebenzela yokuthunga kweso sixeko kwaye waba yenye yezona ndawo zidumileyo kuluntu oluphakamileyo. Ngeli xesha udibana nentatheli entle athandana nayo kwaye bohlukana ngezizathu ezingaphaya kolawulo lwabo.
Emva kwexesha elithile benza i uthembisa ukubuyela eMadrid kwaye ube ngumhloli we-spy ofihlakeleyo. Misela umasifundisane wokuthunga ukutsala abakumgangatho ophezulu. Unxulumene namagosa aphezulu aseJamani kwaye kwikhosi ahlangana nayo nothando lwakhe lwakudala oneemfihlo ezininzi zokuzifihla.
Umxholo ugcwele ukuthandana kunye neemfihlo. Iyafumaneka kwiNetflix.
Ingaba ndadibana njani nomama wakho
Uthotho lwaseNyakatho Melika olunamaxesha ali-9 asasazwe ukusuka ku-2005 ukuya ku-2014. Eli bali libalisa ibali lendlela uTed Mosby adibana ngayo nenkosikazi yakhe kunye nomama wabantwana bakhe.
Imbali yile ibaliswa ngumlinganiswa ophambili ohlala eNew York kwaye ucacisela abantwana bakhe ukuba walufumana njani uthando lokwenene ebutsheni bakhe. Isiqendu ngasinye ngumdlalo weqonga, i-adventure kunye nothando.
UTed uneqela labahlobo abasenyongweni: UMarshall, uLilly, uRobin kunye noBarney. Babalisa awabo amabali ngexesha lothotho ukuze ibenomdla ngakumbi. Iingxaki eziqhelekileyo zothando kunye nobudlelwane bobuhlobo ziyavela ebusheni.
Luthotho lokuqala lweSpanish olwenza isihloko seNetflix. Inkulumbuso ngempumelelo enkulu ngo-2017 kwaye amaxesha amabini akhutshwa kwakuloo nyaka. Ukuqala kokuqaliswa ngoSeptemba 7, 2018. Umlinganiswa ophambili ngumlingisi waseSpain uBlanca Suarez.
Idrama yothando yile iseti kwii-20s kwaye ibalisa ibali labasetyhini abane abasebenza kweyona nkampani inkulu kwezonxibelelwano eMadrid ukwenza umsebenzi wabasebenzisi beefowuni.
Lidia - ophambili ophethe iimfihlo ezininzi zangaphambili kwiimpahla zakhe kwaye ngethuba ahlangane nothando lwakhe lokufikisa kwinkampani asebenza kuyo ngoku, kwelinye icala umnini wenkampani uyonwabile ngobuhle nobukrelekrele bakhe. A thanda unxantathu egcwele ukungavisisani kunye namaxesha anomdla.
Kwelinye icala sino-Ángeles, uCarlota noMarga abakha ubuhlobo obomelele kakhulu bobuhlobo noLidia. Ngamnye wabo unobuntu obahlukileyo kunye neendlela zokuphila. KUNYESifumana impikiswano kwibala njengoko kubandakanya imicimbi eyaphula iiparadigms ngelo xesha, injalo imeko yobufanasini noqhawulo mtshato.
Eli bali lelinye lezintandokazi zethu kuluhlu lweyona midlalo ilungileyo yothando!
Imveliso yoqobo yeNetflix eyaqala ukuboniswa kwi-2016 kwaye ukuza kuthi ga ngoku isizini ezimbini ziyafumaneka kwiqonga.
Yiyo Imbali eqhelekileyo yesibini ekulula ukuba sichonge. Banekhemistri enkulu kwaye nangona ingezizo izibini ezichanekileyo ezichazwe luluntu, sifumana umdla onomdla phakathi kwesi sibini senza uMickey noGus.
Olu luhlu lunika izifundo ebomini njengesibini malunga nokubaluleka kobuntu kunye nobunzima, kunye nesidingo sokulingana phakathi kwesondo nothando. Umlinganiswa ophambili unesitayile esininzi kwaye uya kuthanda ukubona ukuba esi sibini sizisombulula njani iingxaki zabo ngeendlela ezahlukeneyo kwaye siveze iindawo ezahlukeneyo zokujonga iqela labahlobo elibangqongileyo.
Ngaba olu khetho lolona luhlu lubalaseleyo lwezothando luzele iikiti?
Lumka, akukho sizathu sokoyika! Akukho nanye kwezi zihloko zinikiweyo bubusi obusulungekileyo, ukhetho lusekwe kwindibaniselwano yothando nezinye izinto: sinamahlaya, idrama, isenzo, imfashini, imfihlakalo, ubuntlola kunye nezinye izinto oko kuyakwenza ukonwabele uthotho ngalunye kakhulu.
Uthotho lwezithandani lumele unyango njengoko kulula ukwetyisa, ukuze uphumle ngelixa ufunda into entsha okanye ezimbini ngothando kunye nobomi ngokubanzi. Ukuba eyakho luhlobo lothando, kuya kufuneka ubone lonke uthotho olucetyiswayo kule posi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » Olona luhlu lubalaseleyo lwezothando